​Siilaanyo oo go'aan kasoo saaray saami qaybsiga Kuraasta Barlamanka
HARGAYSA, Somaliland- Waxaa bilooyinkii u dambeeyay muran ka taagnaa saami qaybsiga golaha wakiillada maamulkaasi iyadoo axsaabta siyaasadda iyo madaxweyne Siilaanyo iska fogaynayeen cidda go'aan ka gaaraysa.
Markii ugu dambaysay Axsaabta siyaasadda ayaa soo gudbiyay in go'aanka ugu dambeeyay yeesho madaxweyne Axmed Maxamed Maxamud Siilaanyo, kaasoo maanta soo saaray digreeto uu kaga hadlayo qaabka loo qaybsanayo kuraasta Barlamanka.
Hadana hoos ka akhriso Go'aankaasi oo nuqul kamid ah soo gaaray Garowe Online:-
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu digreeto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/M/SHGW/081-4240/092016 uu go’aan ka soo saaray go’aanka ay hore ugu soo gudbiyeen Asxaabta qaranku ee ahayd, Go’aanka Diyaarinta Saami-qaybsiga Kuraasta Golaha Wakiillada.
Waxaanu u dhignaa Goaankaa Mdaxweynuhu sidan:-
1. in aan Doorashada Golaha Wakiillada lagu gali karin saamiga gobollada ee hadda jira.
2. in dib-u-eegis iyo dib-u-qaybin lagu sameeyo Saami-qaybsiga Kuraasta Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland ee Gobollada, iyadoo tixgelin wayn la siinayo deegaanada Awdal, Sool, Sanaag Bari, Dumarka iyo Dadka laga tirada badan yahay.
3. in aan u magacaabo guddi qaran oo hawshan soo fududaysa ama isku soo duba-ridda talo sal balaadhan oo qancin karta dhinacyada kala duwan iyo daneeyayaasha sharci.
4. in la kala qaado Doorashooyinka Wakiillada iyo Madaxtooyada, si loo helo muddo ku filan hawlaha go’aanada sare ku xusan, iyadoo Doorashada Golaha Wakiillada dib loo dhigayo, halka Doorashada Madaxtooyada wakhtigeeda lagu qabanayo.
Dowladda Soomaaliya oo soo warisay kiisas horleh oo ah Coronavirus 03.06.2020. 20:00
Askari lagu eedeeyay dilka Somali-Canadian oo maxkamad lasoo taagayo 03.06.2020. 19:20
Waqtiga xayiraada laga qaadayo duulimaadka maxaliga oo la shaaciyey 03.06.2020. 17:55
Qadar oo wadda qorshe ka dhan ah macdanta uranium-ka ee Soomaaliya 03.06.2020. 17:30
Muxuu Imaaraadka u diidey in uu ku lug-yeesho sii deynta Silvia Romano? 03.06.2020. 16:50
Booliska Soomaaliya oo miino ku qarxiyey magaaladda Muqdisho 03.06.2020. 13:30